Ikhaya leCastle Hill elinokuthula
(30 okushiwo abanye)
Castle Hill, Canterbury, i-New Zealand
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Sarah
Isitayela se-Swiss esakhiwe ngokuqinile se-chalet e-Castle Hill Village ngokunyathela, ukuhamba ngezinsuku, ukubhukuda, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukugoba kanye nokushushuluza emnyango wakho.
Ilungele imindeni enegumbi elilodwa elingaphansi, igumbi lokuhlala elilodwa kanye negumbi eliphindwe kabili elibanzi elinombhede wendlovukazi.
I-bach ifudumele futhi ithokomele nge-log burner nama-heaters kuwo wonke amagumbi.
Ukuhlehla okunokuthula nokuphumuzayo kwe-alpine!
I-Alpenblick iyikhaya elifudumele, elakhiwe ngokuqinile elinendawo yokuphumula evulekile ehlukaniswe kahle nezindawo zokulala. Imibhede ithokomele futhi ikhishi libekwe kahle.
Kukhona okubalulekile njengensipho, i-toilet paper, imikhiqizo yokuhlanza, i-first aid kit njll.
Sisebenzisa i-Alpenblick njenge-kiwi bach evamile, lapho singakhokhisi imali yokuhlanza sicela nje ukuthi uyishiye indawo njengoba uyitholile. Ukuhlanza kungahlelwa nokho ukuze uthole imali eyengeziwe, vele usazise. Ziningi izinto zokulala, amaduvethi, imicamelo njll uma ukhetha ukuza namashidi akho, amakesi omcamelo namathawula. Singahlinzeka ngelineni futhi ngenkokhiso eyengeziwe engu-$30pp
Njengoba kushiwo ngenhla kunemisebenzi eminingi yesimo sezulu esihle. Esimeni sezulu esimanzi i-bach inezincwadi, imidlalo nama-DVD, ne-table tennis, ibhola lezinyawo kanye nemicibisholo egaraji elikhulu eliphindwe kabili elingaphansi kwendlu. Ngeke udinwe!
Igceke elingemuva Kuyimfihlo
Bonisa wonke amasevisi angu- 41
4.90(30 okushiwo abanye)
4.90 out of 5 stars from 30 reviews
4.90 · 30 okushiwo abanye
Amatshe e-Castle Hill, i-Cave Stream, izindawo eziphakeme ze-Porter kanye nezinkundla ze-Cheeseman ski yizinto ezinhle kakhulu zasendaweni phakathi nohambo lwemizuzu emi-5.
Azikho izitolo namakhefi esigodini. Izitolo eziseduze ziseSpringfield 20 mins away. Umjondolo ophuzi lapho wenza ikhofi elimnandi nokudla.
Uma ukhuphuka ngomgwaqo obheke oGwini oluseNtshonalanga kukhona amakhefi ambalwa e-Arthurs Pass, kanye nohambo olude losuku, nokuqwala izintaba kwabafunayo.
Sihlala eChristchurch okuyindawo eyi-1hr 25 mins away, futhi sizotholakala ukuze sisize noma sixoxe ngezinto ezikhangayo zasendaweni.
USarah Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Castle Hill namaphethelo